‘आर्यनलाई ड्र’ग्स बेच्न जरुरी छैन, उसले पूरा जहाज नै किन्न सक्छ’ – Sunaulo Nepal TV
एजेन्सी । शाहरुख खानका छोरा आर्यन खान नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को नियन्त्रणमा छन् । मुम्बईबाट गोवा जाँदै गरेको क्रुज शीपमा हुने ड्र’ग्स पा’र्टीमा छा’पा मारेर एनसीबीले आर्यनलाई पक्राउ गरेको थियो । आर्यन खानलाई पक्राउ गरेपछि उनलाई घण्टौंसम्म सोधपुछ भयो, त्यसपछि एनसीबीका अधिकारीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएका हुन् ।
आइतबार आर्यन र पक्राउ परेका अन्य दुई अरबाज मर्चेन्च र मुनमुन धमेचालाई अदालतमा पेश गरिएको थियो । अदालतबाट सबैलाई एकदिनको कस्टडीमा राख्न दिइएको थियो । सोमबार पुनः आर्यन खान, अरबाज मर्चेन्ट र मुनमुन धमेचालाई किला कोर्टमा पेश गरियो र तीनैजनालाई ७ अक्टोबरसम्म हिरासतमा राख्न निर्णय सुनाइयो ।
आर्यन खान अदालतमा पेश हुँदा एनसीबी र आर्यनका वकिल सतिश मानशिन्देबीच लामो बहस चल्यो । एनसीबीले आर्यन खानमाथि आरोप लगाउँदै उनको फोनबाट आपत्तिजनक चिज र ड्र’ग्स च्या’ट भेटिएको बताएको छ । यता स्टार किडका वकिल सतिश मानशिन्देले जवाफमा एक पछि अर्को गर्दै जवाफ पेश गरे ।
Previous को हुन् यि इच्छाराज जसले ७० जनालाई ठगी गरे ? आफै बैंकका अध्यक्ष र लोन शाखाका प्रमुख बनेर के के गरे ?
Next आर्मी ब्यारेकवाट आर्मि श्रीमान हराउदा श्रीमतीको बेहाल, गाउ देखि काठमाण्डौं सम्म खोज तलास गर्दै श्रीमति, सीसीटीभी क्यामेरा हेर्दा जे देखियो (भिडियो सहित)